कांग्रेसको अपकर्ष गाेविन्द अधिकारी
बाह्रखरी - बिहीबार, भदौ ९, २०७३
हुनत, व्यापक जनाधार र लोकतान्त्रिक साख भएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार हुँदा नै नेपाली कांग्रेसको चरम अपकर्ष भइसकेकै थियो । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने सदस्यहरूको नाम छान्नसमेत नसक्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको कमजोरीले कांग्रेसलाई उपहासको पात्र बनाएको छ । महाधिवेशनपछि कांग्रेस अपेक्षाकृत गतिशील र सशक्त हुने अपेक्षा राख्ने कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू निराश र उदासीन हुन पुगेका छन् । यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म कांग्रेसका गुटहरूबीच भाग बन्डा नमिलेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । सभापति देउवा शुकवार उपचारार्थ विदेश जाने भएकाले त्यसभन्दा पहिले नै केही मन्त्रीको मात्रै भए पनि नामावली प्रधानमन्त्रीलाई दिनेछन् भन्ने अनुमान छ । यसैले कुनै पनि बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समाचार आउन सक्छ तर त्यसले कांग्रेसको बिग्रेको छवि सुधार गर्न कुनै सहयोग हुनेछैन ।
सुशील कोइरालालाई बाँचुन्जेल गुटबन्दीको जडका रूपमा बदनाम गरियो । उनको छवि नै सानो कोटरीमा रमाउने गुटबन्दीका माहिर खेलाडीजस्तै बन्यो । तैपनि, कोइराला बाँच्दासम्म कांग्रेसभित्र जम्मा दुईवटा गुट थिए । ससाना उपगुट थिए तर तिनको अस्तित्व गुटका नेतामा गएर टुंगिन्थ्यो । शेरबहादुर देउवाले आफू सभापति चुनिए गुटबन्दी सधैँका लागि समाप्त गर्ने घोषणा पार्टीको चुनावमै गरेका थिए । देउवाका दुवै प्रतिद्वन्दीले पनि आफू गुटका पक्षमा नभएको र अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, व्यवहारमा भने उल्टो पो । यही आशमा पद पाउन्जेल पो वा पदको आशा हुँदासम्म त गुटबन्दी कायमै रहने रहेछ । यसैले अहिले देउवाले कांग्रेसभित्र ४ वटा गुट बनाएका होलान् । सभापतिका रूपमा सुशील कोइराला पनि गुटकै नेता देखिएका थिए तर सरकार बनाउने बेलामा उनले देउवाको सिफारिसमात्र लिए । अरू कुनै गुट बन्न दिएनन् । बरु, आफूसँग खासै नजिक नभएकाहरूलाई छानेर मन्त्री बनाए ।
देउवाले कांग्रेसमा विधिवत् ४ वटा गुट बनाउने लक्षण देखाए । उनलाई लागेको होला धेरै गुट भए कम्तीमा पौडेलको गुट त कमजोर होला ! रामचन्द्र पौडेललाई पनि चुनाव हारेपछि गुटसमेत बनाएर बस्न नसके त हराइने डर लागेको हुनसक्छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाका लागि त अलग गुटमा नाम दर्ता हुनु नै उपलब्धि हो । पौडेललाई हराउन उनले खेलेको भूमिकाको पुरस्कार पनि हो यो मान्यता । खुमबहादुर खड्का सभापति उमेदवार नभएक पनि एउटा गुटका नेता त हुँदैहुन् । यिनै कारणले सभापति देउवाले पौडेल, सिटौला र खड्कासँग मन्त्रीका नाम मागेको हुनुपर्छ । अर्थात्, सभापति स्वयंले गुटहरूको विस्तार गरेर पार्टी बलियो बनाउने रणनीति अपनाएको देखियो । पार्टीभित्र गुटबन्दी बलियो हुनु ओरालो लाग्ने संकेत हो । दुर्भाग्य, सभापति देउवाले यसको नेतृत्व गरे भने अरू नेताहरूले त्यसलाई मलजल नै गरे ।
गुटगत प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यासले सबैभन्दा कमजोर त सभापति देउवालाई नै बनाएको छ । यस्तो व्यवहारबाट उनले सिंगो कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएका छन् । यतिमात्र हैन उनको गुटबाट मन्त्री बनाइने चर्चामा रहेका नामहरू हेर्दा उनले आफूलाई अत्यन्त संकीर्ण घेरामा सीमित गराउन खोजेको भान हुन्छ । कांग्रेसले पाउने मन्त्रीमा सके त देशको जनसंख्याको संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्थ्यो । नभए पनि कम्तीमा संसद्को संरचनाअनुसार मन्त्री छानिनुपर्थ्यो । त्यसरी समानुपातिक सन्तुलन मिलाएर योग्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउन सकेको भए देउवालाई सबैले स्याबासी नै दिने थिए ।
नुवाकोटका दुई जना छेत्रीहरूलाई मन्त्री बनाउने तर अरू थुप्रै क्षेत्र र जाति प्रतिनिधित्वहीन हुने भएपछि कांग्रेसले आफूलाई कसरी राष्ट्रिय दल भन्ने हो ? तराई मधेसलाई अधिकार दिने नाममा माओवादीलाई अगाडि सारेर सरकार गठन गर्ने तर मन्त्री बनाउने बेलामा संसद्मा चुनिएर आएका मधेसीको अनुपातमा प्रतिनिधित्व नगराउने गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । त्यसभन्दा पनि बढी अर्को चुनावमा तराईमा कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने आत्मघाती कदम अभ्यास हो ।
के गर्नुपर्थ्यो त ?
शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति हुन् । उनले पार्टीका साथीहरूलाई गुटका आधारमा विभाजित गर्नु हुनेथिएन । पार्टीभित्रको समूह आवश्यकताअनुसार बन्छन् र फेरिन्छन् । अगिल्लो पटक सुशील कोइरालासँग रहेकैमध्ये कतिपयले यसपटक देउवालाई साथ दिए । यसैले पनि यस्तो गुट स्थायी हुँदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले सबै साथीलाई उनीहरूले पाउने उचित सम्मान दिने, सल्लाह लिने तर निर्णय आफैँले विवेक प्रयोग गरेर गर्ने अभ्यास गर्नुपर्थ्यो । उनले त्यति गर्न सकेका भए सायद गुटगत भागबन्डाको अभ्यास बिस्तारै समाप्त हुँदै जाने थियो । पक्कै पनि सिंगो पार्टीको नेता बन्नुभन्दा एउटा गुटको नेता हुन सजिलो होला । किनभने सिंगो पार्टीको नेता हुन छाती पनि फराकिलो हुनुपर्छ । विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । मन नपर्ने व्यक्तिलाई पनि स्थान दिनुपर्छ, साथै राख्नुपर्छ । गुटको नेता हुन थालेपछि त के भयो र जति खुम्चे पनि भयो जति खुम्च्याए पनि भयो । तर, त्यस्तो व्यवहारले न पार्टी वा देशको हित हुन्छ न नेताकै इज्जत बढ्छ । गुटलाई मान्यता दिँदै गएपछि अन्ततः पार्टी टुक्रने पृष्ठभूमि न बन्ने हो ।
अझै बेला छ, सिंगो पार्टीको सभापति बन्ने आँट र विवेक मन्त्री छान्दा देखाएर देउवाले देशकै नेता बन्ने बाटो खोल्न सक्छन् । माओवादी केन्द्रले नौ महिनापछि साथ दिन्छ भनेर ढुक्क हुनु मूर्खतामात्रै हो तर पार्टीलाई गुट मुक्त गरेर एक बनाउन सके आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसकै भलो हुन्छ । अझै पनि कांग्रेसलाई हराउने कांग्रेसले नै हो । यदुवंशी बन्न छाड्नेबित्तिकै कांग्रेस अजेय हुनेछ ।
त्यति गर्न सके अहिले ओरालो लागेको कांग्रेस र देउवा दुवै उकालो लाग्नेछन् ।
बिहीबार, भदौ ९, २०७३ मा प्रकाशित